Feon-kira sy soratra masina Alina alina ho an'ny ankizy
Alina mangina - fanamarihana sy lahatsoratra
Alina mangina - lahatsoratra
Hafatra mozika sy soratra amin'ny alina mangina
Alina mangina, alina masina!
Matory daholo ny rehetra, mitomany ny irery
Ireo mpivady kivy sy masina ihany.
Ankizilahy mitaingina volon-doha,
Matory ao amin'ny fiadanana any an-danitra,
Matory ao amin'ny fiadanana any an-danitra.
Zanak'Andriamanitra, oh fihomehezana
Ny fitiavana avy amin'ny vavanao masina,
Tahaka ny manenjika antsika ny ora mangirifiry,
Kristy, amin'ny fahaterahanao,
Kristy, amin'ny fahaterahanao.
Ireo mpiandry ondry dia nanambara voalohany,
Ny anjely Halleluja.
Mety ho avy amin'ny lavitra sy akaiky izy io:
Kristy, ilay Mpamonjy dia eto,
Kristy, ilay Mpamonjy dia eto!
Noten von Weihnachtslied Stille Nackt, masina masina misokatra toy ny tahirim-tsary
Hare kely - fanamarihana sy lahatsoratra
Hazo ao an-davaky ny mozika sy ny lahatsoratra